(Sawiro):Maamulka masaajidka cusub ee Bergen oo codsadey in gacan lagu siiyo dayactirka masaajidka - NorSom News
(Sawiro):Maamulka masaajidka cusub ee Bergen oo codsadey in gacan lagu siiyo dayactirka masaajidka
Waxaa dhawaantan laga furay magaalada Bergen, masaajidkii ugu horeeyay oo ay maamulkiisu soomaali yihiin. Masaajidkan cusub ayaa waxaa laga furay wadada solheimsgaten 58, xaafada Denmarks plass, meeshii horey ay ugu yaali jirtey dukaanka Europis, wadada u dhaxeysa I train Danmarksplass iyo Coop Extra.
Masaajidkan cusub oo loo bixiyay Masjidul-Huda ayaa ku fadhiyo dhul aad u weyn baaxad ahaan, waxeyna maamulka masaajidku sheegeen in loo qeybin karo dhowr qeybood. Qeyb ay raga ku tukudaan, qeyb dumarku ay ku tukudaan oo u gaar ah, qeyb dugsi quraan lagu dhigan karo, si caruurta iyo dhalinyarada loogu baro diinta iyo waliba quraanka, ama dadka waaweyn ay ku xifdiyaan karaan quraanka kariimka ah, maalin walba oo isbuuca kamid ah.
Maamulka masaajidka ayaa sheegay in masjidkan cusub oo noqon doono meel ay si weyn uga faa iideynstaan dhamaan muslimiinta kunool magaalada Bergen, gaar ahaan jaaliada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada.
Hadaba maamulka ayaa ka codsanayo umada soomaaliyeed ee ku dhaqan Bergen ama guud ahaan Norway inay ka qeybqaataan dayactirka iyo dhameystirka masaajidka. Waxyaabaha sida gaarka ah uu masaajidka cusub baahida ugu qabo, ayaa waxaa kamid ah:
Haamaha biyaha kululeeyo: Maamulka ayaa sheegay in biyaha kujiro masaajidka ay yihiin kuwo qabow ah, waxaana sababey haamaha biyaha kululeeyo ee kujiro dhismaha oo ah kuwa aan u shaqeyn sidii la rabey, una baahan in la badalo. Qabowgan iyo vinterka lagu jiro darteed, waxaa muhiim ah in la helo biyo kulul oo dadka masaajidka ku tukanaya ay ku weyso qaataan.
Sajaayado/rooga lagu tukado: Ilaa hada waxey maamulku sheegeen iney suurtogashey in lasoo uruuriyo sijaayado dhowr ah oo ay dadku si kumeel gaar ah ugu tukudaan. Waxaana sida aad ka arki kartaan sawirada hoose banaan dhul weyn oo kamid ah masaajidka. Maamulka ayaa codsanayo in laga qeybqaato dhameystirka roogago lagu tukado, si dad badan ay ugu suurtogasho iney ku tukudaan gudaha masaajidka.
Kitaab: Ilaa hada waxey maamulku sheegeen in masaajidka ay yaalaan afar kitaab oo qaar kamid ah jamaacada masaajidka ay guryahooda kasoo qaadeen. Sidaas darteed waxey maamulku sheegeen in loo baahanyahay in masaajidka loo soo furo kitaabo kale oo badan, si dadka masaajidka ku tukanayo ay ugu suurtogasho iney quraanka ku akhristaan masaajidka gudahiisa.
Noqo Medlem: Maamulka masaajidka ayaa ku boorinayo dhamaan soomaalida kunool magaaladaas iney medlem ama xubin ka noqdaan masaajidkan cusub ee Huda. Xubin ka noqoshada masaajidka waxey lamid tahay adiga oo masaajidka taageeray dhaqaale ahaan.
Ugu danbeyn maamulka ayaa ka codsonayo soomaalida kunool wadanka oo dhan, gaar ahaan magaalada Bergen iyo gobalka Hordaland, iney sida ugu weyn uga qeybqaataan dhameystirka iyo dayactirka masaajidkan cusub oo ah kii ugu horeeyay ee jaaliyada soomaaliyeed ee magaaladaas ay yeeshaan. Ka qeybqaadashada dayactirka iyo qurxinta masaajidku waa saddaqo jaari ah oo aakhiro iyo aduunba ku anfici doonto.
Waxaad ku soo hagaajin kartaa wixii Tabarucaad ah Maamulka Masjidka oo kala ah:-
Sheekh Xuseen Xirsi Ciroobe: 94725932
Maxamed Cabdi Maxamuud: 48479363
Aadan Xasan Buulle: 93058998
Kontonr: 3633 43 98239 Sparebanken Vest
Adresse: solheimsgaten 58 , Magaalada Bergen ee Dalka Norway.
Previous articleSiyaasiyiinta soomaaliyeed maxey kaga dayan karaan Khaled Mahmood 1996?
Next articleXubno ka tirsan dowlad federalka Somalia oo Oslo socdaal shaqo ku imaanayo